Former Zimbabwean cabinet minister, Saviour 'Tyson' Kasukuwere. Photo: Twitter/Saviour Kasukuwere
Pretoria – Zimbabwe’s exiled former local government minister, Saviour Kasukuwere has distanced himself from widespread allegations of an imminent military coup in his home country.
“I make this statement in response to the allegations contained in a press statement released by the government of Zimbabwe, as read by Minister of Home Affairs, Kazembe Kazembe on Wednesday 10 June 2020. The allegations are that myself, along with other individuals are peddling rumours on an alleged coup plot,” said the former Zanu PF national political commissar, who held different ministerial posts under former president Robert Mugabe.
The Standard – an independent Zimbabwean weekly - reported that state security agents in Zimbabwe had interrogated Kasukuwere's brother, on the day the government led by President Emmerson Mnangagwa claimed there were people spreading rumours of an imminent coup last week.
According to the publication, Kasukuwere’s brother, Dickson Mafios, was arrested as he left Harare Polytechnic alongside Zimbabwean parliamentarian Wonder Mashange, where they were in Covid-19 quarantine after a recent trip to South Africa.